Lifestyle & Fitness – Shwe Naung
ဖွေးဥနုနေတဲ့ အသားအရည်လေးနဲ့ ကြွေချင်စရာ ကောင်းအောင် ကပြနေတဲ့ ခင်ရတီသင်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး……….
N N | January 30, 2022
လက်ရှိ မှာ အောင်မြင် လျက် ရှိနေ တဲ့ photo model တစ်ယောက် ဖြစ် ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ မြန်မာ ဝတ်စုံ လေး တွေနဲ့ social media လောက မှာ ခေတ်စား နေ ပြီး မြန်မာ ဝတ်စုံ ပုံရိပ်လေး
N N | December 8, 2021
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တက်သစ်ဆ မော်ဒယ်လ် ချောကလျာ ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မေ်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား
မကြာခင်ကာလတုန်းက နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်က နောက်ထပ်ကိုယ်ဝန် လွယ်ထားရချိန်မှာဘဲ ကိုဗစ်ရောဂါကို ခံစားခဲ့ရ………
N N | October 12, 2021
မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေမှာ ဇာတ်ပို့နေရာနေ ကနေ ကောင်းကောင်း သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်နဲ့ ကိုဘင်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ က‌တော့ လူတိုင်း သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော် နှီုင်းယှဉ်တို့ကတော့ အွန်လိုင်း ကနေ Live လွှင့်ပြီးစျေးရောင်း ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောချိုချိုလေးနဲ့ စျေးရောင်းတတ်တာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ကလည်း အလုပ်အပ်တာ တွေများလွန်း တာကြောင့် အချိန်တွေ တောင်မလောက် တတ်ဘူးလို့လည်း
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနှင့် ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဝင်းရွှေရည်သင်းရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ……….
N N | October 1, 2021
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်စ မော်ဒယ် ဝင်းရွှေရည်သင်း သိကြ မယ် ထင်ပါ တယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ နဲ့ ပုရိသ တွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူထား တဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်
N N | September 25, 2021
သရုပ်ဆောင်ကျော်ထက်အောင်ကတော့ အမိုက်စား သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ကျရာဇာတ်ကောင်မှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် နိုင်တာကြောင့် ပရိတ်သတ် တွေရဲ့ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရ ရှိထားပါတယ်။ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ အနေနဲ့လဲပရိတ်သတ် အသိများလာခဲ့ ပါတယ်နော်။ အနုပညာဆိုတာ ကိုယ်လိုတာဆွဲ တွေးဖို့တင်ပြမှု သက်သက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုအခု လိုသေချာရှင်း ပြလိုက် တာပဲဖြစ် ပါတယ်နော်။ ကျော်ထက်အောင်က အနုပညာဆိုတာကိုယ်
ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး အချိုးအစားကျလွန်းတဲ့ ညို့အားပြင်း ခန္ဓာကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ပုံလေးများ……..
N N | September 22, 2021
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက် ရရှိထားတဲ့ ပြည်သူ့ အသည်းကျော် အနုပညာ ရှင်တွေ ထဲမှာ စူစူလို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ မင်းသမီး ချောလေး အိချောပိုတစ်‌ယောက်လည်း အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူမဟာ အနုပညာပျိုးခင်းက နေမြေတောင် မြှောက်ပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဖြစ်ပြီးတော့ အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်း အောင်မြင်မှု တွေအခိုင် အမာနဲ့ အနုပညာ
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနှင့် ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ မယ်လိုဒီရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…….,
ချစ်ပရိသတ် ကြီးရေ ဒီတစ်ခါမှာတော့ အနုပညာ လောက မှာ အောင်မြင်မှု တွေကို ရရှိထားပြီး ဖြူစင်ဝင်းပတဲ့ အသားအ ရည်လေးနဲ့ အရွယ် တင် နုပျိုနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ကတော့ မယ်လိုဒီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ သရုပ် ဆောင်ပိုင်းတွင် ထူးချွန်တဲ့ သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုကိုလည်း ရရှိကာ
ကိတ်လွန်းလှတဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နှင့် ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ စတယ်လာရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်‌လေးများ……….
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်စ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် စတာလာ ကိုသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ်ရှု မောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ် လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ် ဆောင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ ဇနီမောင်နှံ ကတော့ ချစ်စရာကောင်း လှတဲ့ သမီးဦးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထား……
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ ဇနီမောင်နှံ ကတော့ ချစ်စရာကောင်း လှတဲ့ သမီးဦးလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး သမီးလေးကတော့ လက်ရှိမှာ (၃)လအရွယ်ကို ရောက်ရှိ နေခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေး ကတော့ (၃)လဆိုပေမဲ့ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင်ကို ချစ်ဖို့ ကောင်းလွန်းလှပါတယ်။ ပရိသတ်
သရုပ်ဆောင် သ ဉ္ဇာနွယ်ဝင်းကတော့ ပဌာန်းရွတ်ရင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေကို ပြောပြလာခဲ့……..
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် သ ဉ္ဇာနွယ်ဝင်း ကတော့ လက်ရှိမှာ ဝေဖန်မှုတွေ များစွာကို ကြုံ တွေ့နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အခြေအနေမှန် တွေကို ရှင်းပြခဲ့ သော်လည်း ဘယ်သူကမှ မယုံခဲ့ ကြပါဘူးနော်။ အခုမှာလည်း သ ဉ္ဇာနွယ်ဝင်းကတော့ ပဌာန်းရွတ်ရင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ ရတာတွေကို ပြောပြ လာခဲ့ပါပြီနော်။ ” ပဌာန်းရွတ်ဖတ်ပြီးထူးခြားမူ့လေးတွေ